Ahoana ny fomba fanaovana GIF mihetsika ao amin'ny Photoshop [Tutorial Step by Step] | Famoronana an-tserasera
Fomba fanaovana GIF amin'ny Photoshop CC tsikelikely
Manuel Ramirez | | Fitaovana famolavolana, Photoshop
Photoshop dia traikefa amin'ny tenany izay manatsara be ny fotoana ary manohina ny fotoana ny fomba fanaovana GIF amin'ny Photoshop CC 2020. Izany hoe, hampiasa ny kinova Photoshop farany izahay hamoronana iray amin'ireo atiny haino aman-jery izay lamaody tokoa.
Afaka mahita ireo GIF ianao ao amin'ireo apps chat mamela antsika hizara azy ireo avy any Giphy, sehatra Internet ahafahantsika misintona azy ireo ary mampakatra ny azy manokana. Koa satria lasa tompon'ny famoronana atiny izahay dia handeha miaraka amin'ity torolàlana ity izay tsy mamela saribakoly tsy hanana loha ho an'ny GIF voavolavola tsara ary mety hijerena izay tiantsika rehetra.
1 Inona no atao hoe GIF?
2 Ahoana ny fomba fanaovana GIF amin'ny sary amin'ny Photoshop CC 2020
3 Manomana ny filaharana ho an'ny GIF mihetsika
4 Manondrana ny filaharantsika ho GIF
Inona no atao hoe GIF?
Voalohany indrindra dia ataovy mazava fa a GIF dia endrika fisehoan-tsary voafehy izany dia miteraka sary mihetsika bisikileta sy tsy manam-petra; Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha avela hilalao ny mpilalao GIF dia tsy hitsahatra hilalao izany. Raha ny tena izy, misy GIF zavakanto izay mamoaka horonantsary izay toa velona ilay sehatra iray ihany, toy ny latsaka milatsaka amin'ny fahalavoana iray hafa ao anatin'ny dingana tsy misy fetra.
Toy ny sarimiaina mandritra ny androm-piainany, ny GIF dia misy andian-tsary izay nilalao nisesy namorona ny illusion ny hetsika. Izy io dia endrika iray izay nanjary nilaina tamin'ny karazana tranonkala rehetra toa ny IMGUR na ireo fampiharana amin'ny chat izay manampy antsika hitady GIF amin'ny lohahevitra rehetra ary milalao ny filaharan'ny sary mihetsika na ny marika «Oh" fiantsoana tany am-boalohany.
Podemos misintona izay GIF avy amin'ny tranonkala mba hamindrana azy amin'ny Photoshop ary tsapanao fa ny filaharan'ny sary misesy ary ireo frame no hiasantsika amin'ity lesona ity.
Ahoana ny fomba fanaovana GIF amin'ny sary amin'ny Photoshop CC 2020
Voalohany dia hampiasa ny andiany farany an'ny Photoshop avy amin'ny Creative Cloud izahay. Miaraka amin'ity ambony latabatra ity, andao mamorona GIF avy amin'ny sary. Mamaky ny fizotrany rehetra izahay miaraka amina antontan-taratasy iray manana ny sakany sy ny halavany mitovy amin'ireo sary izay hampiasainay ho an'ny GIF:
Izahay dia mamorona lamina 800 x 1067 teboka miaraka amin'ny vahaolana 72 piksel (Azontsika atao ny mampidina azy mba ho ambany ny lanjan'ny GIF)
Ny maody sary dia tazonina amin'ny RGB
Mamorona ny antontan-taratasy izahay
Izao no hataontsika dia manafatra ny sary rehetra hamoronana filaharana GIF. Amin'ity tranga ity dia namporisika ny troll kely aho hamindra azy mankany amin'ny fakantsary miaraka amina andian-tsary nalaina tamin'ny findaiko Galaxy Note10 +. Raha atotaly dia manodidina ny 23 ny sary ka mety haharitra iray na roa na faharoa. Tadidio fa ny sarimihetsika mahazatra hitanao 24 na 30 FPS.
Andao ho any Script> Load Files to Stack
Manokatra ny mpizaha sary mba hahafahantsika misafidy ireo rehetra ireo te hampiditra ao amin'ny GIF avy amin'ny toerana fampirimana izahay
Entinay izy ireo ary ny sary rehetra dia hosokafana amin'ny antontan-taratasy iray ihany (hitaky fotoana kely arakaraka ny isan'ny sary sy ny habeny)
Azo ampiharina amin'ny horonan-tsary koa io raha hanangana GIF:
Tsotra avy amin'ny File> Import> Sarimihetsika misy sosona
Ary ho vokatr'izany dia ny antontan-taratasy teo aloha ihany miaraka amin'ireo zana-kazo rehetra, fa jereo ny haben'ny mitovy aminy isaky ny segondra afaka manana frame 24 na 12 isika raha toa ka sary mihetsika fohy na mahazatra
Manomana ny filaharana ho an'ny GIF mihetsika
Andao izao sokafy ny fandaharam-potoana mba hitantanana ny filaharana manontolo:
Andao ho any Window> Timeline
Mifidiana ny bokotra "Mamorona sary mihetsika"
Tsy maintsy manao izany isika izao tsindrio ny sary famantarana telo mitsivalana amin'ny fandaharam-potoana
Avy amin'ny menio pop-up no fidintsika "Atsofohy ho fisaka ny zana-kazo". Amin'izany fomba izany dia holaniana ireo sosona rehetra noforonina teo aloha miaraka amin'ireo sary izay nohafainay tao amin'ny Photoshop
Ary amin'ny Timeline dia tsindrio ny bokotra filalaovana hijerena raha tsy maintsy manindry ny «Invert frames» isika; marina ao amin'ilay bokotra hamburger izay efa noterentsika teo aloha
Ataontsika izany hijerena raha mitohy ny playback ary araka ny tadiavintsika, satria mety ho averina miverina izy io rehefa manafatra ny sarin'ny GIF sarimiaina
Ho hitanao izao eo amin'ny fizaram-potoana dia manana ny sary rehetra izay mamorona ny GIF isika sarimiaina. Isaky ny frame ireo dia manana zana-tsipika midina izay mampiseho ny isan'ny segondra izay maharitra "frame" na frame.
Raha tiantsika ny sarimiaina, ary amin'ity tranga ity nampiasa andiana sary izahay mba hamoronana ny filaharany manokana Miaraka amin'ny troll kelintsika, ny hataontsika dia ny mampiakatra na mampihena ny fotoana isam-baravarana na frame mba hahatonga ny sary mihetsika ho zava-misy kokoa.
Manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 8 dia avelantsika hitranga, ary avy amin'ny frame 9 dia hampiakarinay kely ny faharetany:
Safidio amin'ny fanalahidy fanodinana ny zana-kazo na frame fa te-hanova ny faharetany izahay
Manery izahay amin'ny zana-tsipika ambany ary ovainay ny fotoana hampitombo azy kely. Ohatra, amin'ny 0,5 segondra
Mamerina sy manombana izahay raha miadana loatra ny hetsika. Raha ny amiko dia io, ka manandrana mifidy ny frame rehetra aho ary mampiasa 0,2 segondra
Sarimiaina havaozina ary afaka maharitra fotoanaAndao hojerentsika fa mijanona ao anaty loop tsy manam-petra ny GIF.
Eo ambanin'ny Timeline fotsiny dia ho hitanao fa efa namboarina ho Infinity
Manondrana ny filaharantsika ho GIF
Ankehitriny dia manana ny ampahany amin'ny manondrana rehefa efa nofaritantsika ny sary mihetsika na ny filaharana tadiavinay. Miankina amin'ny habetsaky ny sary nohafarana anay ny zava-drehetra na ny fanapahana ilay clip video nampiasainay mba hamoronana ilay GIF.
Andao ho any File> Export> Save for Web na ny fitambarana fototra fotsiny no ampiasainay: fifehezana + sora-baventy + alt + S
Misafidy GIF 128 preset miaraka amin'ny dithering
Raha tiantsika mampihena ny lanjan'ny GIF mihetsika afaka manova ny sakany sy ny haavony amin'ny haben'ny sary
Eo amin'ny faran'ny varavarankely fotsiny dia mila mitady sary mihetsika isika ary amin'ny safidy famerimberenana dia misafidy tsy manam-petra. Zava-dehibe ity dingana ity mba hitsaharana tsy mijanona rehefa milalao
Ianao dia afaka zahao ny valin'ny haben'ny GIF eo ankavia farany ambany. Amin'ity tranga ity dia mandeha 7MB izahay mba hahafahantsika mampihena ny haben'ny sary
Azo atao izany milalao ny sandan'ny dither hampihenana megabytes maromaro ny lanjan'ilay rakitra. Rehefa mandalo isika, dia aheninay ho 400 ny sakany ary raha ny zava-misy dia manana 2MB izahay izay tsy ratsy ho an'ny GIF
Manondrana miaraka amin'ny Save izahay
Ianao dia afaka jereo ny endrik'ilay GIF an-tsary izay nataontsika ary ny hoe 2MB dia ny hoe filaharana kely dia tsy ratsy mihintsy. Ankehitriny tsy maintsy mampiasa ny majika ianao na maka rakitra video vitsivitsy amin'ny rakipeo nataonao mba hamoronana ireo GIF anao nohavaozina tanteraka.
Sahala amin'izany afaka mamorona GIF mihetsika miaraka amin'ny Adobe Photoshop CC 2020 ianao amin'ny mora rehetra eto amin'izao tontolo izao ary avy amin'ity fitaovana matihanina lehibe mamela antsika hanao zavatra majika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fomba fanaovana GIF amin'ny Photoshop CC tsikelikely
Mariana rubino dia hoy izy:
Salama Manuel! Misaotra tamin'ny tutorial! Tena mahaliana! Miarahaba anao!
Valiny tamin'i Mariana Rubino
Salama Mariana! Tiako ianao tianao io. Miarahaba: =)
Adobe dia mijery ny fomba fiasan'ny endri-javatra fanitsiana loko vaovao ao Lightroom